मेस्सीको फ्री किक विफल पार्न ला लिगा टोलीको नयाँ चाल …!! – Next World Online
Next World Online > खेलकुद > मेस्सीको फ्री किक विफल पार्न ला लिगा टोलीको नयाँ चाल …!!
मेस्सीको फ्री किक विफल पार्न ला लिगा टोलीको नयाँ चाल …!!
लिओनेल मेस्सीको फ्री किकलाई विफल पार्न ला लिगा क्लबहरुले भिन्ना भिन्नै रणनीतिहरु अपनाउदै आएकोमा हाल विभिन्न टोलीहरु यसमा सफल भएको देख्न सकिन्छ । धेरै खेलहरुमा मेस्सीको फ्री किक गोल नै खेलको अभिन्न अंग बन्दै आएकोमा मेस्सीले २०१९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ५० औ फ्री किक गोल पुरा गरेका थिए (स्पोर्ट्स बाइबलको तथ्यांक*) । औसत फ्री किक तथ्यांक हेर्ने हो भने मेस्सीले हरेक सिजन ४ गोल फ्री किक मार्फत गरेको देखिन्छ ।
माथिको तथ्यांक झन्दै सिंगो क्लबको फ्री किक गोल भन्दा मेस्सीले गरेको फ्री किक गोल धेरै देखिन्छ, अन्तिम ५ सिजनमा मेस्सीले २० फ्री किक गोल गरेका छन् जवकी युभेन्ट्सले १५, रोमाको १३, पेरिस सेन्ट जर्मन र लियोनको मात्र १३ फ्री किक गोल तथ्यांकमा देखिन्छ ।
तर २०२० मेस्सीका निम्ति निकै कठिन सिजन बनेको छ, ६२ फ्री किक प्रयासमा मेस्सीले कुनै गोल दर्ता गर्न सकेका छैनन् । बार्सिलोना प्रतिद्वन्दीहरुले मेस्सीको फ्री किक प्रहार रोक्न प्रयोगात्मक रुपमा सफल भएका छन् । फ्रि किक प्रहार गर्ने समय मेस्सी विरुद्ध झन्डै तिन तहका विपक्षीले रेखांकन गर्दै उनको फ्री किकलाई विफल पार्दै आएका छन् । गए राति खेलमा कार्डिजले समेत उक्त रणनीति पेश गर्दै मेस्सीलाई निरिह बनाए ।
हरेक कोणमा विपक्षी खेलाडीले घेराबन्दी गर्दा गोल प्रयासमा ठेस सफलता मेस्सीले पाउन सकेका छैनन्, बल अघि ३ तहको घेरा साथै दुवै गोल पोष्टको दायाँ र बायाँ खेलाडी र गोल रक्षक बस्दा मेस्सीले सहि प्रयास गोलमा परिणत गर्न सकेका छैनन् । ६२ औ प्रहारमा मेस्सीले कुनै फ्री किक गोल गर्न सकेका छैनन् ।
दुई दशकमा बार्सिलोनाले फेरी एक पटक निकै कठिन खेल समय यापन गर्दै छ, मेस्सीको गोल खडेरीले थप बार्सिलोनामा तनाब थपेको छ । हाल बार्सिलोना ७ औ स्थानमा छ, नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमनसंगको सहकार्य बार्सिलोनामा सुस्त देखिन्छ ।बार्सिलोना इतिहास कै एक सफल फ्री किक टेकरबाट निराशजनक नतिजा आएसंगै बार्सिलोना थप संकट झल्किएको छ । तर बार्सिलोनाको स्थिति जुन स्थानमा रहे पनि बार्सिलोनाका प्रमुख फ्री किक टेकर भने दोश्रो कोहि हुन सक्दैन ।
Previous Postलिभरपुलको जित उपहार ९ महिनापछि एनफिल्ड फर्किएका समर्थकलाई
Next Postनेपोली तेस्रो स्थानमा युभेन्ट्सलाई पछि पार्दै